ပြည်ပမှာကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်း (နှင့်ပိုပြီး) ။ Expats အတွက်လမ်းညွှန်။ | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွားခြင်း
နားရွက်၊ အကြံဥာဏ်များ၊ ရှင်သန်မှု
မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်: သိ။ ရကျိုးနပ်အရာအားလုံး
ပြည်ပမှာကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်း (နှင့်ပိုပြီး) ။ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ကိုလမျးညှနျ။ ပြည်ပမှာကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်း (နှင့်ပိုပြီး) ။ Expats အတွက်လမ်းညွှန်။ ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်အများစုသည်ကျည်ဆန်အချက်များနှင့်စတင်သည်။ အားလပ်ရက်မှာကားငှားရမ်းခြင်း သင့်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေများစွာပေးတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါတို့ဟာမိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်တယ်၊ ငါတို့လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမောင်းလို့ရတယ်။ အောက်ပါစာသားကအတော်လေးရှည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကိုငါလွှတ်လိုက်မယ်။ သင်သည်ဤစကားလုံးများကိုဖတ်ရှုနေသဖြင့်သင်သိကောင်းသိလိမ့်မည် ပြည်ပမှာကားတစ်စီးငှားရမ်း isagood idea and you are only looking forahandful of tips that will help you to go through the whole process quite smoothly. So I, Mr. Nightmare, asaman who rents cars abroad quite often, I will share suchahandful.
ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန်။ ကားတစ်စီးဘွတ်ကင်လုပ်ခြင်းသည်လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးနောက်သင်လုပ်သင့်သောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အထက်ပါစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာခဲပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မစ္စတာအိပ်မက်ဆိုး၊ ကျွန်တော်သူတို့ကိုအကြံဥာဏ်ပေးပြီးလိုက်နာရန်မလိုပါ
တစ်နည်းနည်းဖြင့်, သင့်ကားကိုကြိုတင်မှာယူထားတာကိုနောက်မှမလုပ်သင့်ပါ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ကျလွန်းလျှင်အခြားခရီးသွားများကပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုခိုးယူနိုင်သည်။ ထို့နောက်စျေးပေါ။ အအေးခံကားများအစားသူတို့သည်စျေးကြီးခြင်းသို့မဟုတ်ညည်းညူခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သလောက် (ဒီနေ့မှ Mr. Obvious ကိုပြောပြပါ) ။ အားလပ်ရက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့စီးနင်းကာအနည်းငယ်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့်နေပူလိုက်စားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့စီးနင်းမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသာကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်းသည်သဘာဝကျပါသည်။
သို့သော်ထိုသို့ is သတိရရကျိုးနပ် there is nothing more convenient than renting at the airport ။ သင်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘဲအချိန်လျော့နည်းသွားမည်မဟုတ်ပါ၊ လွှဲပြောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ဆင်ခြေဖုံး Lidl တွင်ဘီယာ (သို့မဟုတ်အနှီးများကံကြမ္မာသင့်ကိုကလေးများနှင့်ဆက်ဆံပါက) ချက်ချင်းဘီယာတင်ပို့နိုင်သည်။ ဝေးလံသောလေဆိပ်မှခရီးသွားလာခြင်းအတွက်ပေးဆောင်ခြင်းထက်ရက်အနည်းငယ်ကြာကားတစ်စီးငှားရမ်းခြင်းသည်လည်းမကြာခဏစျေးသက်သာသည်။
ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ငှားရမ်းခက
အများကြီးပေးဆပ်ခြင်းဖြင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့်ကြီးမားပြီးတံဆိပ် (ဥပမာ Avis, Heartz, Europcar, Sixt), \_ t
မစ္စတာအိပ်မက်ဆိုးသည်များသောအားဖြင့်ဂိတ်နံပါတ် (၃) ကိုရွေးချယ်သည်။ အကြောင်းမှာသူသည်အနည်းငယ်သာပေးဆပ်လိုပြီးသူ၏နေ့စဉ်ပေါင်မုန့်ကြောင့်အန pay တရာယ်ကျရောက်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ငှားရမ်းမည့်နေရာတွင်ငှားရမ်းခမည်မျှရှိသည်ကိုသိရှိရန်စျေးနှုန်းနှိုင်းယှဉ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့သွေးဆောင်ခဲ့ကြပေမယ့်သင်သတိရဖို့လိုတယ် နှိုင်းယှဉ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအတွက်အာမခံမရှိဘဲကုန်ကျစရိတ်များသောအားဖြင့်ပေးထားသည် ။ ဤအတောအတွင်းကားငှားရမ်းခြင်း - ငါတို့ပြောကြလိမ့်မယ် - လုံးဝအရေးကြီးသည်။ နှင့်အတော်လေးလမ်း။ အာမခံပရီမီယံပမာဏသည်ငှားရမ်းခ၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်သောအခြေအနေများမှာအဆန်းမဟုတ်ပါ။
နှိုင်းယှဉ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ငှားရမ်းခကုမ္ပဏီများသည်မသိသော (သို့) သူတို့သိလိုခြင်းမရှိသောအခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများကိုထည့်သွင်းကြသည်။ ဥပမာ, econo … <ကြကုန်အံ့ ကြိုးခုန် နာမည်များ> ဒုတိယယာဉ်မောင်းကိုအခမဲ့ပေးလေ့ရှိသည်။ ဒါကြီးပါတယ်၊ ဒါဆိုငှားရမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်ကော။ အကယ်၍ နှိုင်းယှဉ်မှုကကမ်းလှမ်းလျှင်၎င်းကိုကမ်းလှမ်းပါ၊ သင်အပိုထပ်ဆောင်းပေးရမည်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ ကားငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ထမ်းဖြစ်ခြင်းထက်ယာယီ amnesia ကိုပိုမိုသက်သာစေသည့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်
ကျွန်ုပ်၏ရွှေပညတ်မှာ Mr. Nightmare et Consortes ဖွင့်နိုင်သည့်စျေးအသက်သာဆုံးကားကိုမှာယူရန်ဖြစ်သည်။ ဤအကြံပြုချက်ကိုလိုက်နာခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကောင်းမွန်သောဆုကြေးတစ်ခုရရှိစေသည်။ ကားကိုအဝေးတွင်မရရှိနိုင်ပါကအမိန့်ပေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ? ကောင်းပြီဆိုရင်မင်းရလိမ့်မယ် ပိုဆိုးဘို့ပိုကောင်းတဲ့ကားတစ်စီး !
မစ္စတာကြက်သွန်နီ၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မစ္စတာအိပ်မက်ဆိုးကအကြံပေးသည် - ဈေးအပေါဆုံးကိုယူပါ၊
CDW (Collision Damage Waiver) - ပုံမှန်အားဖြင့်ငှားရမ်းထားသောကား၏စျေးနှုန်းတွင်ပါဝင်သောတိုက်မှုအာမခံ။ CDW သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုကိုကိုယ်ပိုင်အလှူငွေပမာဏ (ပိုလျှံ) အထိရရှိစေသည်။ လက်တွေ့တွင်၊ ဤကဲ့သို့သောအရာသည်သင်အလုပ်လုပ်သည် - အကယ်၍ သင်သည် 1000 ယူရို၏အနိမ့်ဆုံးပေးချေမှုရှိသော CDW ​​ပါသောကားတစ်စီးကိုငှားပြီး 2000 ယူရိုအတွက်ငှားရမ်းထားသောကားကိုပျက်စီးလျှင်၊ သင်သည်သင်၏အလှူငွေပမာဏကိုဆိုလိုသည်၊ ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်
TP (ခိုးမှုကာကွယ်မှု) - CDW ၏နိယာမနှင့်အတူတူပင်ကား၏ဖြစ်နိုင်သည့်ခိုးမှုနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်ထည့် ၀ င်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္financialာရေးတာဝန်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော CDW ​​နှင့် TP တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ထည့် ၀ င်မှုတစ်ခု (အမည်အမျိုးမျိုး၏အခြေခံအုတ်မြစ်အောက်တွင်ပေါ်လာနိုင်သည်) ကိုအာမခံတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ကိုယ်ပိုင်အလှူငွေ (ပိုလျှံ) - ကားပြproblemsနာဖြစ်လျှင်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီမှကျွန်ုပ်တို့ထံမှစုဆောင်းနိုင်သည့်အများဆုံးပမာဏ။ ကိုယ်ပိုင်လှူဒါန်းမှုပမာဏသည်ကျွန်ုပ်တို့သွားသောနိုင်ငံ၊ ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီ၏မူဝါဒနှင့်ကားအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ယူရိုငွေရာဂဏန်းမှထောင်ပေါင်းများစွာအထိပင်ပမာဏရှိနိုင်သည်။
SCDW (Super Collision Damage Waiver) - ကိုယ်ပိုင်အလှူငွေပမာဏကိုသုညသို့ဖြစ်စေ၊ အများဆုံးယူရိုရာပေါင်းများစွာအထိကန့်သတ်ထားသည့်အာမခံအပြည့်အ ၀ ။ အချို့သောငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီများတွင်၎င်းသည်အခြားအမည်များအောက်တွင်ရှိနိုင်သည်။
ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီအားလုံးသည်ကားအာမခံအပြည့်အဝပေးသည်။ အဲဒါကိုခေါ်နိုင်ပါတယ် SCDW , Super Relax သို့မဟုတ် Super Hiper Mega IW General ဖြစ်သော်လည်းအမြဲတမ်းဖြစ်သည်။ အဲဒါတွေကိုယူသင့်လား။ ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်တယ်၊
ကောင်းပြီ၊ ဒါကအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအာမခံကုန်ကျစရိတ်၊ တရားဝင်မှုကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးပြီးယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ပြinsuranceနာမှာဤသို့သောအာမခံသည်အလွန်စျေးကြီးနိုင်သည်။ သို့သော်သင့်တော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်အပြည့်အဝအာမခံသောငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်ရှာနိုင်ပါက၎င်းတို့ကိုယူရန်နှင့်မစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်အကြံပေးသည်။
အငှားကုမ္ပဏီမှာအပြည့်အဝအာမခံကိုဝယ်တဲ့အခါ ပြည့်ပြည့်ဝဝသေချာအောင်လုပ်ပါ ။ ဒါကဟာသမဟုတ်ဘူး - ကမ္ဘာမှာအရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အပြည့်အဝအာမခံမရှိဘူး။ စံသတ်မှတ်ချက်အရ SCDW တွင်သော့များဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်လောင်စာဆီအမှားများကိုတင့်ကားထဲသို့ထည့်ခြင်းမပါဝင်ပါ။ ဤအရာကိုနားလည်ရန်သာပြောနိုင်သည်။ သင်သည်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ထဲသို့ ON ကိုလောင်းခြင်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အတွက်ပေးဆပ်သင့်သည့်အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်သဘောတူပေမည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, တစ်ခါတစ်ရံတွင်စွပ်စွဲအပြည့်အဝအာမခံကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမဖုံးဘူးသောဖြစ်ပျက် တာယာများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ ကိုယ်ထည်သိုမဟုတ်ကြေးမုံများ ။ ဒီအခြေအနေမှာဘာလုပ်ရမလဲ။ မစ္စတာအိပ်မက်ဆိုးသည်အခြားအငှားကုမ္ပဏီရှာဖွေရန်အကြံပေးသည်။
SCDW စျေးနိမ့်သောအငှားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုသင်ရှာမတွေ့ပါကပြင်ပကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင်အလှူငွေအတွက်အာမခံကိုထုတ်ယူပါ ။ ပေးထားတဲ့ငှားရမ်းခထဲမှာပိုလျှံတာက 1500 ယူရိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် 1500 ယူရိုကိုမပေးဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာမခံထားတာပဲ။
ဤရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်သည်သံသယရှိသောအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီမှ SCDW ကိုဝယ်ခြင်းထက်များသောအားဖြင့်စျေးသက်သာသည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်ပြားပေါ်တွင်ငွေအမြောက်အမြားကိုပိတ်ဆို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသောကြောင့်၎င်းတွင်အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုလည်းရှိသည် (ဤကိစ္စတွင်အငှားကုမ္ပဏီက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အလှူငွေအားလုံးကိုအာမခံသည်) ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ထပ်ဆောင်းအာမခံစရာမလိုဘဲကားငှားရန်မအကြံပြုပါ။ ငါတို့မှာမတော်တဆမှုတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုရင်တောင်ငါတို့ဘာမှကိုမထိနဲ့၊ သူမ Fiat Panda ရဲ့သူခိုးကိုမသွေးဆောင်နိုင်ဘူး၊ အငှားကုမ္ပဏီကစိတ်ကူးယဉ်ခြစ်ရာအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်ဟုအခွင့်အလမ်းကောင်းရှိနေသေးသည်။ ကျွန်တော့် ဦး လေးကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမှာပါ၊ ဓာတ်ပုံတွေရမယ်၊ ကားကိုကြည့်မယ်၊
ငါဘယ်သူ့ကိုမှမကြောက်စေချင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကမဆန်းဘူးဆိုတာသိရတာကောင်းတယ်။ အငှားကုမ္ပဏီတွေကအာမခံအပေါ်ဝင်ငွေ ထို့ကြောင့်၎င်းကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုခုခံနိုင်မှုသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ပါးရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အာမခံ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားသောအခါယာဉ်မောင်းများ၏အလေ့အကျင့်နှင့်မောင်းနှင်သည့်ယဉ်ကျေးမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီလိုအီတလီမှာအာမခံကိုယူဖို့အကြံပေးချင်တယ်။ သြစတြီးယားနိုင်ငံမှာတော့သင်ဟာအန္တရာယ်မယူနိူင်ဘူး။ အမြဲတမ်းရွေးချယ်မှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်းငှားရမ်းခြင်း (99.9% အမှုကိစ္စများတွင်) သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလုံခြုံရေးအပ်ငွေတစ်ခုလိုလိမ့်မည်။ ထိုပမာဏ၏ပမာဏသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောအာမခံအမျိုးအစားနှင့်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အလှူငွေဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်ပျက်စီးမှုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ပေးဆပ်ရလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကားကိုမကြိုမီ၊ သိုက်အတွင်း၌ရှိမရှိကြည့်ရန်စစ်ဆေးသင့်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြွေးဝယ်ကဒ်ကန့်သတ်ချက် ။ ယခုသင်မေးလျှင်၊ သို့သော်သင်ကဒ်ရှိရမည်လား။ - Mr. Nightmarish သည်ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာဖြေကြားလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီနတ်ဆိုးများတီထွင်မှုငှားရမ်းခြင်းဖြင့်ချစ်ကြတယ်။
သင့်တွင်ကဒ်မရှိပါကသင်က၎င်းကိုရလိမ့်မည် (သို့) ငှားရန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုမလိုအပ်သည့်ငှားရမ်းသည့်ဆိုင်ကိုရှာရန်နာရီပေါင်းများစွာသင်ပိုက်ကွန်ကိုရှာဖွေရလိမ့်မည်။ မင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ငါမှာကဒ်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့သူငယ်ချင်းကအဲ့မှာရှိတယ်။ သင်၏မိတ်ဆွေသည်ကားမောင်းသူဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၌ကဒ်တစ်ခုရှိသော်လည်းသင်၌ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မရှိလျှင်သင်၌ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုရှိသော်လည်းသင့်တွင်ကဒ်မရှိပါကသင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြaနာရှိသည်။
မစ္စတာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ကြိမ်ထက်ပို ဝူး… သူသည်လုံခြုံရေးအတွက်အိမ်ယာရှိပုလင်းတစ်လုံးထက်အနည်းငယ်ပိုကုန်ကျသည်ကိုမဖတ်ရသည့်သူသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး နောက်ကွယ်တွင်ရပ်တည်ရမည်ကိုအလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကာကွယ်မှုပမာဏစစ်ဆေးပါ မအံ့ surprise စရာမရှိပါ (မင်္ဂလာပါကဲ့သို့ချစ်စရာကောင်းသည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ) ။
ငွေသွင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ - ရံဖန်ရံခါ (ရံဖန်ရံခါ (ရံဖန်ရံခါဖြစ်ခဲသည်၊ သို့သော်)) သင်၏ကဒ်ပေါ်ရှိရန်ပုံငွေများကိုပိတ်ဆို့မည့်အစား၊ ငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီသည်၎င်းတို့ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်သို့သာလွှဲပြောင်းပေးလိမ့်မည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်အသင့်အတင့်အကျိုးရှိသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင့်တွင် zloty ကဒ်ရှိလျှင်သင်၏ cash register ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်ဘဏ်နှုန်းဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ကားမောင်းခွင့်လက်မှတ် - ပိုလန်သည်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်တို့တွင်လုံလောက်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားဆန်းပြားသောဒေသများသို့ပျံသန်းပါကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လိုအပ်နိုင်သည် (မထွက်ခွာမီစစ်ဆေးပါ),
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် - အီးယူတွင်များသောအားဖြင့် ID ကဒ်လုံလောက်ပါသည်။
အငှားကုမ္ပဏီမှ Pickup ကား
အငှားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်နှိုက်ကမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတယ်၊ ဒါကြောင့်သင့်ရှေ့မှာတန်းစီတစ်ခုကိုတွေ့ရင်တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာသိထားပါ။ တစ်နည်းပြောရရင်မင်းခဏစောင့်ရမယ်။ သို့သော်သင်ကပျံနှံ့သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်မမြန်သင့်ပါ။ မင်းနောက်ကွယ်မှာရပ်နေတဲ့ရှုံးနိမ့်သူတွေဟာအချိန်အများကြီးပေးရမယ်
အကယ်၍ သင်သည်အပြည့်အဝအာမခံချက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၊ ပစ်ကပ်မတိုင်မီကားကိုဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ ။ ပျက်စီးမှုမရှိစေရန်ကားပတ်လည်တွင်လမ်းလျှောက်ပါ။ စာချုပ်နှင့်သင်ရရှိမည့်ကားကဒ်တစ်ခုစီကိုကားကဒ်ပေါ်တွင်မှတ်သားထားသင့်သည်။ ကဒ်ထဲတွင်တစ်ခုခုမရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိပါကငှားရမ်းသည့် ၀ န်ထမ်းအားချို့တဲ့မှုကိုဖြည့်ရန်တွန်းအားပေးပါ။ ကားကိုရိုက်ချက်များစွာမှရိုက်ပြီးနောက်ငှားရမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်မည်သည့်ပြlesနာများနှင့်မဆိုအဝတ်လျှော်ရန်နောက်ပိုင်းတွင်အဝတ်လျှော်ရှိသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သတိပြုပါ လှည်းကဒ်တွင်မပါ ၀ င်သည့်အသေးငယ်ဆုံးခြစ်ရာများကိုပင်သင်အတွက်ပေးရမည် ။ ဟုတ်ပါတယ်, မျှတသောငှားရမ်းခရှိပါတယ်, အလားတူအမှုအရာမှာသင်၏လက်ကိုဝှေ့ယမ်း, ဒါပေမယ့်သင်ကတ ဦး တည်းကိုတွေ့ရုံမယူဆနိုင်ပါ။ အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ပြီးထိုင်ခုံနှင့်ကူရှင်ချုပ်၏အခြေအနေအလုံးစုံကိုလက်ခံသင့်သည်။
မင်းမှာအာမခံအပြည့်အစုံရှိပါသလား။ ထို့နောက်ရုံ ဝင်၍ ရွှင်လန်းစွာအနားယူပါ။ ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုမင်းကငွေချေးသူနှင့်သင်သဘောတူထားသည့်အတိုင်းကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ လောင်စာဆီပမာဏကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အာမခံပမာဏနဲ့လုံခြုံရေးပမာဏအကြောင်းပါ။ ထို့အပြင်သင်စစ်ဆေးနိုင်သည် -
ကီလိုမီတာကန့်သတ် - ကီလိုမီတာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာငှားရမ်းရန်မကြာခဏငှားရမ်းရန်ကမ်းလှမ်းမှုများရှိသော်လည်း၊ ထိုသို့သော Currant ကိုသင်အမြဲရှာနိုင်သည်။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီစစ်ဆေး။ အကန့်အသတ်မရှိရွေးချယ်နိုင်သည်။
ယာဉ်မောင်းရဲ့အသက် - အကယ်၍ သင်သည် 25 အောက်တွင်ရှိပါက၊ တစ်ဖက်တွင်အလွန်အေးသောကြောင့်သင်၏ရှေ့တွင်ဘဝများစွာရှိသောကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကားတစ်စီးငှားရမ်းရန်ပြproblemနာအနည်းငယ်ရှိသည်။ အချို့သောငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီများသည်အရွယ်မရောက်သေးသူများကိုအပိုကြေးများပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်စိတ်ဝင်စားသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့စစ်ဆေးမည်နည်း။ ယာဉ်မောင်းသူအသက်အရွယ်အပြင်အချို့ငှားရမ်းသောကုမ္ပဏီများကသူ၏အလုပ်သင်ကိုအာရုံစိုက်ကြသည်။ လူတိုင်းသည်သင်၏အရည်အချင်းကိုယုံကြည်ရန်ဆန္ဒရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
ငှားရမ်းချိန် - များသောအားဖြင့်သင်စတင်သောနေ့တိုင်းအတွက်ပေးချေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကားကိုယနေ့ 10 တွင်ယူပြီးမနက်ဖြန်မှာ 11 တွင်ပြန်ပို့ပါကသင်နှစ်ရက်လုံးထိခိုက်နစ်နာမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ကားကိုတစ်နာရီစော။ သင်ပြန်ပို့ပါ၊ နှာခေါင်းတွင်စကားပြေကောက်ယူသည့်အချိန်ကိုသက်သာပါစေ။
လောင်စာမူဝါဒ - ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမှာကားကိုငှားရမ်းထားသောလောင်စာဆီနှင့်အတူတူပင်ပြန်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ တခါတရံမှာငှားရမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဓာတ်ငွေ့အပြည့်ပါတဲ့ကားကိုပေးတယ် ခင်ဗျားအားလပ်ရက်ရောက်နေပြီ၊ ဒါကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့မင်းဆီကိုလောင်စာဆီမပါဘဲသင်ပေးနိုင်တယ် ။ အကယ်၍ သင်သည်ဤလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကြောင့်အရူးလုပ်ပါကသင့်အားလောင်စာဆီဖြည့်မှုအတွက်ငွေပိုပေးလိမ့်မည်ကိုသင်စိတ်ချနိုင်သည်။
နိုင်ငံခြားကားငှားရမ်းခြင်း - အကယ်၍ သင်သည်နယ်စပ်ကိုကားဖြင့်ဖြတ်ကျော်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏ငှားရမ်းခကိုစိတ်မဝင်စားသည်ကိုရှာဖွေသင့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်သည်ထိုသို့သောဇိမ်ခံပစ္စည်းအတွက်အပိုဆုကြေးပေးရသည်၊ သို့သော်အမြဲတမ်းမပေးချေ။ ကျွန်ုပ်တို့လုံးဝမတည်ရှိသည့်နိုင်ငံတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အခါအခြေအနေမှာမှုန်ဝါးလာသည်။ မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ် ) ။ ထိုအခါငှားရမ်းကုမ္မဏီသည်ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်ဘာပြောနေသလဲဆိုတာသင်သိသင့်သည်။
ဖွင့်ချိန် - ငှားရမ်းခငယ်များသည်များသောအားဖြင့်နာရီနှင့်အမျှများလေ့မရှိသောကြောင့်ပိတ်ချိန်များသည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ရက်များနှင့်အလွန်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ခြင်းကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးပါ။ အချို့နေရာများတွင်ရုံးချိန်ပြင်ပရှိကားများပြန်ပို့ခြင်းအတွက်အပိုကောက်ခံသည်။
ဒုတိယယာဉ်မောင်း - အချိန်ကာလအားဖြင့်ဘီယာသောက်ချင်လျှင်ဒုတိယကားမောင်းသူသည်အမြဲတမ်းအသုံးဝင်လိမ့်မည်။ ငှားရမ်းခအများစုတွင်၎င်းသည်ပေးဆောင်ရသော option တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ခေါင်းစဉ်ကိုအပိုကုန်ကျစရာမလိုဘဲစီမံနိုင်သည်။
သို့သော်ထိုသို့မဟုတ် ... အချို့ဖြည့်စွက်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပေါ်တူဂီအတွက် Algarve အဲဒါဟာ vignette စာဖတ်သူကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်။
အောက်တွင်ငှားရမ်းထားသော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်မည်သည့်အသေးစားဒေသခံငှားရမ်းကုမ္မဏီများစာရင်းကိုဖော်ပြထားသည် အကြံပြုလိုပါတယ် .
အကြောင်းရင်းနှစ်ခုကြောင့်စာရင်းသည်တိုသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးကျွန်တော်မှာကြီးမားတဲ့ network behemoth တွေမပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ငါမှာတိုင်ကြားစရာတစ်ခုခုရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာများသောအားဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းရထားလို့ပါ။ သို့သော်လည်း၊ သူတို့သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးလူသိများသောကြောင့်ရှာဖွေခြင်းသည်ပြshouldနာမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ်မပါဝင်ပါ ဒေသခံအငှား ငါမကျေနပ်သောကုမ္ပဏီများရှိသည့်ကုမ္ပဏီများ၊ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင်အနည်းငယ်စုဝေးခဲ့ကြသည်။
ကရေတေကျွန်း၌ငါအကြံပြုပါသည် Kappa ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအတော်လေးစျေးပေါပြီးပြtroubleနာကင်းတယ်။ သူတို့ကကျွန်းပေါ်ရှိဌာနခွဲများစွာရှိပြီး Chania နှင့် Heraklion ရှိလေဆိပ်များအပါအ ၀ င်။
သည် Sardinia , ငါအကြံပြုနိုင်ပါတယ် Autonoleggio Sardinia ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်နှင့်အတူငှားရမ်း။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးတွင်စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်မည်မဟုတ်သော်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်ပြtroubleနာကင်းသောလည်ပတ်မှုသည်စျေးကြီးရကျိုးနပ်ပါသည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်မရှိသောသူများအတွက်ရွေးချယ်မှုကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအငှားကုမ္ပဏီသည်ငွေပေါင်နှံရန်အခွင့်အလမ်းရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပေါ်တူဂီကိုကားဖြင့်မောင်းလျှင်သာဖြစ်သည် Drive4fun ။ ၀ န်ဆောင်မှုများမှာအလွန်မြင့်မားသော antiluiluvian ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ အနိမ့်အာမခံစျေးနှုန်းများ, အပေါင်နိမ့်, အခမဲ့များအတွက်အပိုဆောင်းယာဉ်မောင်းနှင့်စပိန်ဝင်ရန်အခွင့်အလမ်း။ အဓိကအားဖြင့်ကားထိုင်ခုံများ၏စျေးနှုန်းချိုသာမှုကြောင့်ကလေးများရှိသောမိသားစုများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
သင်၏ခရီးစဉ်အပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သင်၏အကြွေးဝယ်ကဒ်သော့ဖွင့်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါ။ ငါလုပ်ခဲ့တာပိုကောင်းတယ်၊ ငါရေးပြီးတဲ့အတိုင်း၊ ငှားရမ်းတဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေဆီလျှော်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမေ့သွားတတ်ကြသည်။
ထိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ယခုသင်သိကောင်းသိလိမ့်မည် ကားငှားရမ်းနည်း နောက်တဖန်မငိုဘဲ၊ သင့်တွင်မှတ်ချက်များရှိပါကကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးပါ။ အကယ်၍ သင့်မှာမရှိဘူးဆိုရင်၊ ကျွန်မရဲ့ဆောင်းပါးကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်စာမျက်နှာကိုကြိုက်နှစ်သက်ရန်လည်းကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ ၎င်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်မရောက်သေးသောကြောင့်